Hotnews | Eleven Broadcasting
အနုပညာရှင်တွေရဲ့ စုံတွဲပုံတွေကို ကျွန်တော့ဘက်က အရင်မတင်ပါဘူး-ဓါတ်ပုံ ရဲဟိန်း (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
ရွှေထူးနဲ့ ရွှေမှုန်က ကျွန်တော့ကို surprise လုပ်ခဲ့တာပါ
Posted in Hotnews, programLeaveaComment on အနုပညာရှင်တွေရဲ့ စုံတွဲပုံတွေကို ကျွန်တော့ဘက်က အရင်မတင်ပါဘူး-ဓါတ်ပုံ ရဲဟိန်း (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
”Single Mom ဖြစ်ရခြင်းအပေါ် သိမ်ငယ်မှုမရှိဘူး ” အဆိုတော် ချမ်းချမ်း (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
■ သမီး အတွက် အမေကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်နေတယ်။Single Mom ဖြစ်ရခြင်းအပေါ် သိမ်ငယ်မှုမရှိဘူး။ (၂)ယောက်ရပ်တည်လာတဲ့ဘ၀ ကို တစ်ယောက်တည်းရပ်တည်ပြီးလျှောက်လှမ်းနိုင်တယ်။ Single Mom တိုင်း အဲလိုပဲလက်ခံနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Posted in Hotnews, programLeaveaComment on ”Single Mom ဖြစ်ရခြင်းအပေါ် သိမ်ငယ်မှုမရှိဘူး ” အဆိုတော် ချမ်းချမ်း (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
ပရိသတ်တွေကို မွေးနေ့လာဖို့ ဖိတ်လိုက်တဲ့ သမီးလေး ထိပ်ထားသခင် (ရုပ်သံအစီစဉ်)
Posted on August 24, 2018 by Aung Kyaw Moe
ထိပ်ထားသခင်လေးရဲ့ မွေးနေ့ မကြာမီ ရောက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သမီးလေးက “ သမီးမွေးနေ့ကို လာကြပါ… အိမ်မှာ လုပ်ပါမယ်၊ ကိတ်မုန့် ခွဲပါမယ်၊ သမီးက ပျားဂါဝန်လှလှလေး ၀တ်ပါမယ်’’ လို့ ပရိသတ်ကို မွေးနေ့ ဖိတ်ကြားထားပါတယ်။
Posted in Hotnews, programLeaveaComment on ပရိသတ်တွေကို မွေးနေ့လာဖို့ ဖိတ်လိုက်တဲ့ သမီးလေး ထိပ်ထားသခင် (ရုပ်သံအစီစဉ်)
“ရွှေမှုန်ရတီ က ထင်ရာလုပ်တတ်တယ်။ အကြောတင်းတယ်” လို့ပြောတဲ့ညီမဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် ငွေမှုန်ရတီ (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
Posted on August 21, 2018 August 21, 2018 by Aung Kyaw Moe
အလုပ်ပေါ်မှာဇွဲရှိတာ၊ စိတ်ဓာတ်မာတာကို အတုယူတယ်။ သူမှန်တယ်ထင်ရင် သူလုပ်တယ်။ သူလုပ်တဲ့ အရာက သူ့အတွက် ကောင်းတယ်ထင်ရင် သူလုပ်တယ်။
Posted in Hotnews, programLeaveaComment on “ရွှေမှုန်ရတီ က ထင်ရာလုပ်တတ်တယ်။ အကြောတင်းတယ်” လို့ပြောတဲ့ညီမဖြစ်သူ သရုပ်ဆောင် ငွေမှုန်ရတီ (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
“အပြင်မှာမဖြစ်ရတာနဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ မဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့ဆင်ဆာက တော်တော်ဆိုးပါတယ်”ယုန်လေး (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖန်တီးခွင့်ပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဖန်တီးခွင့်ပေးရင်လည်း ပေါကားရိုက်တဲ့သူတွေက တလွဲပေါကားတွေ ရိုက်နေဦးမှာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ခွဲထွက်မယ့်သူတွေထဲမှာ ပါတယ်။
Posted in Hotnews, programLeaveaComment on “အပြင်မှာမဖြစ်ရတာနဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ မဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့ဆင်ဆာက တော်တော်ဆိုးပါတယ်”ယုန်လေး (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
ပရိသတ်က အချစ်ကြီးလွန်းလို့ ဖြစ်သွားတဲ့ အကြောင်းပါ.ကျွန်မသီချင်းကို ပရိသတ်တွေပိုသိသွားတယ်။ အဲဒီစိတ်ပဲထားတယ်။ (ကျွန်မ သီချင်း မူရင်းအဆိုရှင် ကေကေမိုး) (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
Posted on August 14, 2018 August 14, 2018 by Aung Kyaw Moe
ပြိုင်ပွဲဝင်တွေမှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု က အနည်းနဲ့ အများရှိကြတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားတာကြောင့် အမှားအနည်းအများ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ စာသားမှားသွားတာ မဟုတ်ဘူး။ စာသားကျွံသွားတာပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတော့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။
Posted in Hotnews, programLeaveaComment on ပရိသတ်က အချစ်ကြီးလွန်းလို့ ဖြစ်သွားတဲ့ အကြောင်းပါ.ကျွန်မသီချင်းကို ပရိသတ်တွေပိုသိသွားတယ်။ အဲဒီစိတ်ပဲထားတယ်။ (ကျွန်မ သီချင်း မူရင်းအဆိုရှင် ကေကေမိုး) (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
မမ ချမ်းမြေ့ မောင်ချို ကို တိုက်ခိုက်လို စိတ်နဲ့ကျွန်မသီချင်းကို ဆိုခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး -ခင်ပိုးပန်းချီ (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
ကျွန်မ သီချင်းကို အိမ်မှာ အပျော်တမ်းဆိုခဲ့တာပါ။ မမ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုကို တိုက်ခိုက်လိုစိတ်နဲ့ ဆိုခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး ကိုဖြိုးမြတ်အောင် ရော။ မမ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရော မနက်ဖြန် ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် ပြိုင်ပွဲမှာ Fighting ပါ
Posted in Hotnews, programLeaveaComment on မမ ချမ်းမြေ့ မောင်ချို ကို တိုက်ခိုက်လို စိတ်နဲ့ကျွန်မသီချင်းကို ဆိုခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး -ခင်ပိုးပန်းချီ (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
၂၀၂၀ မှာ ရုပ်ရှင်သမား အသစ်နဲ့အဟောင်း နှစ်ပိုင်းကွဲသွားရမယ် ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်ကြားဖူးတဲ့ ကောလဟာလကြောင့် ရုပ်ရှင်လောကကို ထိုးနှက်နေတာလား . . . ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်) (ရုပ်သံအစီအစဉ်)
■ ကျွန်တော် ကောလဟလကို မယုံပါဘူး။ တစ်ကယ် ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုလက်ရှိမှာ တစ်စုံတစ်ဦးက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ရုပ်ရှင်လောက ပျက်ဆီးအောင် လုပ်နေသလား ထင်ရတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ရုံမတင်ခင် လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ ပြန့်နှံ့နေမှုကို အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီး မတားဆီးနိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့ ရုပ်ရှင်ဟာ မကြာခင်ကျဆုံးခြင်းကို ရောက်ပါတော့မယ်။
Posted in Hotnews, programLeaveaComment on ၂၀၂၀ မှာ ရုပ်ရှင်သမား အသစ်နဲ့အဟောင်း နှစ်ပိုင်းကွဲသွားရမယ် ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်ကြားဖူးတဲ့ ကောလဟာလကြောင့် ရုပ်ရှင်လောကကို ထိုးနှက်နေတာလား . . . ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်) (ရုပ်သံအစီအစဉ်)